Xhosa LUPHAWU LWERHAMNCWA! Kwincwadi yeSityhilelo (incwadi yokugqibela yeBhayibhile oyiNgcwele) siye walumkisa kokufumana uphawu lwerhamncwa (okuyi Umchasi!). Kodwa yintoni kanye le uphawu lwerhamncwa? Yaye oku uphawu abe nanto yakwenza kule ligama lerhamncwa okanye inani le-666? Okanye, uphawu lwerhamncwa into eyahlukileyo ngokupheleleyo & bahlukile ligama lerhamncwa kunye nenombolo-666? Kwaye yintoni kanye ligama lerhamncwa kunjalo? Ingaba umntu, uhlanga, iqela lweentlanga, okanye ibandla? Yaye kuthekani ngalo uphawu-yinto yokoqobo, ebonakalayo? Okanye ngaba endaweni nentsingiselo yokomfuziselo, yokomfuziselo? Masiqalise off kwiphulo lethu ukuba aphendule le mibuzo ngu yokuqala kuguqukela ISityhilelo 13, 16-17. Apha sixelelwa ukuba Beast "efunekayo wonke-abancinane nabakhulu, abazizityebi nabangamahlwempu, abakhululekileyo nabangamakhoboka, ukuba banikwe uphawu esandleni sabo sokunene okanye ebunzi. Kwaye akukho mntu wayevunyelwa ukuba athenge okanye athengise nantoni na ngaphandle uphawu, kungaba igama lerhamncwa, nokuba linani  legama lalo "(NLT). Ngoko esi sibhalo yenza icace ngokupheleleyo ukuba amanqaku lwerhamncwa nje nokuba ligama lerhamncwa okanye NUMBER emela igama lakhe. Ngoko ke, ukuba lo uphawu lwerhamncwa phezu kwakho kuyafana yokuba ligama lerhamncwa kuwe (okanye NUMBER omela lakhe gama-666!). NUMER WERHAMNCWA-666! Kodwa kutheni inani-666? Le nombolo amele njani igama lakhe? Kulungile, masenze ukuvumela iBhayibhile uphendule lo mbuzo. ISityhilelo 13:18 (LB) - "... amaxabiso ngamanani oonobumba egameni lakhe kongeza 666." Le iSibhalo ngokuphandle ibonisa ukuba ama-666 nje SUM lixabiso lenani le ligama lerhamncwa! Umzekelo, thatha igama "VIX." Ukuba sisebenzisa "Numerals yamaRoma" koko V = 5, I = 1, & X = 10 Ngoko ukuba dibanisa ixabiso lenani incwadi nganye ngeli gama (5 + 1 + 10) sifumana 16. Ngoko ke, Vix ayikwazanga nguno- Beast kuba igama lakhe wongezelela ukuya kuphela ku-16 (ngoxa igama eziphilileyo ndiya kongeza ukuya kuma-666). Kodwa ukuba Vix akanguye Beast, ngubani na? NGUBANI WERHAMNCWA? Ngoko ke NGUBANI na lo Beast (okuyi Umchasi)? Ngaba ukubangisana United yaseYurophu (savuka "Ungcwele" Roman Empire) njenge wokunifundisa? Okanye ngaba Beast inkokheli yale nkqubo waphila? The Beast ifuzisela ZOMBINI, kokubini ubukhosi nenkokeli yalo! Kodwa kuqala imela nenkokeli yalo. Ukungqina ukuba imela yokuphela kwexesha inkokheli zopolitiko kwale nkqubo kungekudala-ezayo makhe sibuyele kwenye isibhalo kwincwadi yeSityhilelo. ISityhilelo 19: 20 "Ngoko ke irhamncwa yathinjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki .... Aba babini baphoswa bephila edikeni lomlilo elivutha isulfure "(Matthew). Esi sibhalo ubonisa ngokucacileyo ukuba Beast simele lokuphela kwexesha NGAMNYE, kuba yena umprofeti obuxoki ke waphoswa edikeni lomlilo! NGOKOQOBO, EBONAKALAYO? Kodwa yintoni kanye luluphawu lwerhamncwa, uphawu le inkokeli lokuphela kwexesha nezopolitiko? Ngaba iya kuba YENDAWO, Literal AMANQAKU (okanye lo uphawu nje isikweko, ukuba ezinye uhlobo efihliweyo, intsingiselo eyimfihlakalo)? Uphawu lwerhamncwa iya kubakho uphawu yokoqobo emzimbeni! KwiSityhilelo 13:16 & iinguqulelo 14:11 ezininzi ezahlukeneyo zeBhayibhile (GW, nog, EXB, ngokutsho kweBhayibhile, & JB) kurhulumente ukuba uphawu lwerhamncwa iya kuba "ndiziphethe" kwi ngabantu. I AMPC, NABRE, & urhulumente EXB ukuba uphawu lwerhamncwa ziya zestampu ebantwini. Kodwa ke ndithanda indlela iBhayibhile Living liguqulela ezi ndinyana zimbini ilungileyo, njengoko utsho ukuba uphawu lwerhamncwa iya kuba "ziyabhalwa" abantu! Kodwa kungakhathaliseki ukuba uphawu lwerhamncwa uphawu, isitampu, okanye zingabhalwa, zonke ezi nguqulelo ngamxhelo uyavuma ukuba amanqaku aya kuba AMANQAKU yokoqobo GADALALA ukuba ngokulula abanye baya kuba nako ukubona! UKUFUMANA AMANQAKU = SOKUZINIKELA KUSATHANA! Ukuba ufunda incwadi yeSityhilelo ngenyameko kakhulu (ingakumbi isahluko 14) uya kuqaphela ukuba nabani na UKULUNGELE owamkela uphawu lwerhamncwa uya kohlwaywa ngokuqatha nguThixo. Kodwa uThixo uya kuzivelela umntu abanalo eli uphawu EMZIMBENI Ukunyanzelwa phezu kwabo, ningayi kubohlwaya yena umntu bengazi wamamkela lo uphawu (njengoko abathile nkolelo iyelenqe bafundisa)! Umntu kufuneka ngengqiqo, eyamkela ngovuyo uphawu. Kodwa nabani na abamthobelanga ngabom ivumela uphawu lwerhamncwa, ukuba sibekwe umzimba wakhe (nokuba esandleni sabo sokunene, nokuba kusemabunzini, abo) ziya kuya ngqo noThixo! Kunokuba bathobele uMdali wabo, baya endaweni kuba uthobela Sathana! Baya uyi kuba zibonakalisa axhasa nokuthembeka kwabo uSathana uMtyholi (jonga ISityhi 13:16 kuzo zombini i-AMP & EXB iinguqulelo zeBhayibhile)! Kwaye abo benjenjalo baya ngokungqongqo kohlwaywa nguThixo! Kwaye baya kuba Akunakuziphendulela, kuba nje kukho amangqina amabini (okanye abaprofeti) bebaxelela ukuba banqule irhamncwa (okanye nomfanekiso wakhe) okanye amkele uphawu lwalo, kodwa ingelosi evela ezulwini kwakhona umthetho abemi belimiweyo ukuba benze njalo (ISityhilelo 14: 9)! LIGAMA LERHAMNCWA? Ngoko ke, yintoni na ligama lerhamncwa? Yaye ngubani na oya kuba le yinkokeli ekupheleni-ixesha ezopolitiko? Lingubani na, inye into siyazi ngokuqinisekileyo, oonobumba igama lakhe uya kongeza ukuya 666! Kodwa nabani na ucinga negama elilungileyo ngaphezu ROMAN? Okokuqala, "ROMAN" elinokuguqulelwa njenge "LATEINOS" ngolwimi yesiGrike. (Kodwa kutheni sebenzisa ulwimi isiGrike? Ngenxa yokuba uninzi iTestamente Entsha yayibhalwe ngesiGrike-kuquka incwadi yeSityhilelo). Xa ulwimi lesiGrike "L" imele inani 30, "A" 1, "T" 300, "E" ngu 5, "ndathi," yi-10, "N" yi-50, "Thixo" 70, kwaye " S "nto 200. Dibanisa nabo (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) kwaye yintoni ke? 666! Okwesibini, ukuba igama lakhe "ROMAN," bekuya kufana nemfundiso emnye njengoko bekuya ukumela izinto ezintathu kwenye. asizi kuba igama yoku-xesha inkokheli zopolitiko, kodwa kwakhona ukumela uBukhosi baseRoma kwakunye ROMAN (yamaKatolika) Church. ISILUMKISO! Kungakhathaliseki ukuba yintoni na kwixesha elizayo, UNGAZE (phantsi kwazo naziphi na iimeko konke!) Ukufumana uphawu lwerhamncwa okanye kumnqula (i.e. ngokamchasi) okanye umfanekiso wakhe !!! "Bantwana, lilixa lokugqibela eli; njengoko walivayo wena ... umchasi-Kristu uyeza ... umntu wesono ... unyana wotshabalalo; lowo uchasayo, uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo, nehlonelwayo ... yena uya kuhlala itempile kaThixo, kuba naye ngokwakhe uThixo "(1 Yohane 2:18 Matthew; 2 Tes 2: 3-4 Matthew; 2 Tes. 2: 4. ozigqatsayo). "Emva Lawuvulela umlomo walo ekumnyeliseni uThixo, ukuba lilinyelise igama lakhe, nomnquba wakhe, nabo bahleli emazulwini. Kwaye Lanikwa igunya lokulwa nabangcwele [amaKristu okwenyaniso] libeyise [liboyise] kubo. Lanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga. Kwaye bonke abo bemiyo phezu komhlaba baya kumnqula kuye, abamagama angabhaliweyo encwadini yobomi ... "(ISityhi 13: 6-8 Matthew). "Ukuba umntu uyalinqula irhamncwa [i.e. Umchasi] nomfanekiso walo [i.e. umfanekiso wakhe], aze amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe okanye esandleni sakhe, uya kusela kwiwayini yomsindo kaThixo, eliphalala bapheleleyo kwindebe ubhavumo lwakhe. Yaye uya kuthuthunjiswa ngomlilo nesulfure phambi izithunywa ezingcwele phambi kweMvana [i.e. UYESU khristu]. Umsi wokuthuthunjelwa kwabo unyuka ngonaphakade kanaphakade, yaye akukho abanakuphumla imini nobusuku abo banqula irhamncwa nomfanekiselo walo, nomntu ukuba uthi alwamkele uphawu lwegama lalo "(ISityhi 14: 9-11 Matthew). Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngokuphathelele uphawu lwerhamncwa, nceda ufunde "ISityhilelo ukuvakala" kwaye Ezi ncwadi zifumaneka simahla kwi "Umchasi & The Final Iminyaka 7.": www.TheBibleComesAlive.com xhosa = isiXhosa Ukuba ngaba ungathanda ukufunda naziphi na izinto zam okanye iincwadi ngolwimi lwakho, nqakraza nje kule linki ilandelayo: https://translate.google.com. Olu nxibelelwano luza ukuguqulela yonke imibhalo zam ukusuka IsiNgesi ukuya ngolwimi lwakho. Kodwa ukuguqulela page 1 kuphela ngexesha. — Other Books & Articles in Your Language — If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.
Kwincwadi yeSityhilelo (incwadi yokugqibela yeBhayibhile oyiNgcwele) siye walumkisa kokufumana uphawu lwerhamncwa (okuyi Umchasi!). Kodwa yintoni kanye le uphawu lwerhamncwa? Yaye oku uphawu abe nanto yakwenza kule ligama lerhamncwa okanye inani le-666? Okanye, uphawu lwerhamncwa into eyahlukileyo ngokupheleleyo & bahlukile ligama lerhamncwa kunye nenombolo-666? Kwaye yintoni kanye ligama lerhamncwa kunjalo? Ingaba umntu, uhlanga, iqela lweentlanga, okanye ibandla? Yaye kuthekani ngalo uphawu-yinto yokoqobo, ebonakalayo? Okanye ngaba endaweni nentsingiselo yokomfuziselo, yokomfuziselo?
Masiqalise off kwiphulo lethu ukuba aphendule le mibuzo ngu yokuqala kuguqukela ISityhilelo 13, 16-17. Apha sixelelwa ukuba Beast "efunekayo wonke-abancinane nabakhulu, abazizityebi nabangamahlwempu, abakhululekileyo nabangamakhoboka, ukuba banikwe uphawu esandleni sabo sokunene okanye ebunzi. Kwaye akukho mntu wayevunyelwa ukuba athenge okanye athengise nantoni na ngaphandle uphawu, kungaba igama lerhamncwa, nokuba linani  legama lalo "(NLT). Ngoko esi sibhalo yenza icace ngokupheleleyo ukuba amanqaku lwerhamncwa nje nokuba ligama lerhamncwa okanye NUMBER emela igama lakhe. Ngoko ke, ukuba lo uphawu lwerhamncwa phezu kwakho kuyafana yokuba ligama lerhamncwa kuwe (okanye NUMBER omela lakhe gama-666!).
Kodwa kutheni inani-666? Le nombolo amele njani igama lakhe? Kulungile, masenze ukuvumela iBhayibhile uphendule lo mbuzo. ISityhilelo 13:18 (LB) - "... amaxabiso ngamanani oonobumba egameni lakhe kongeza 666." Le iSibhalo ngokuphandle ibonisa ukuba ama-666 nje SUM lixabiso lenani le ligama lerhamncwa! Umzekelo, thatha igama "VIX." Ukuba sisebenzisa "Numerals yamaRoma" koko V = 5, I = 1, & X = 10 Ngoko ukuba dibanisa ixabiso lenani incwadi nganye ngeli gama (5 + 1 + 10) sifumana 16. Ngoko ke, Vix ayikwazanga nguno- Beast kuba igama lakhe wongezelela ukuya kuphela ku-16 (ngoxa igama eziphilileyo ndiya kongeza ukuya kuma-666). Kodwa ukuba Vix akanguye Beast, ngubani na?
Ngoko ke NGUBANI na lo Beast (okuyi Umchasi)? Ngaba ukubangisana United yaseYurophu (savuka "Ungcwele" Roman Empire) njenge wokunifundisa? Okanye ngaba Beast inkokheli yale nkqubo waphila? The Beast ifuzisela ZOMBINI, kokubini ubukhosi nenkokeli yalo! Kodwa kuqala imela nenkokeli yalo. Ukungqina ukuba imela yokuphela kwexesha inkokheli zopolitiko kwale nkqubo kungekudala-ezayo makhe sibuyele kwenye isibhalo kwincwadi yeSityhilelo. ISityhilelo 19: 20 "Ngoko ke irhamncwa yathinjwa, kunye nalo kwabanjwa umprofeti obuxoki .... Aba babini baphoswa bephila edikeni lomlilo elivutha isulfure "(Matthew). Esi sibhalo ubonisa ngokucacileyo ukuba Beast simele lokuphela kwexesha NGAMNYE, kuba yena umprofeti obuxoki ke waphoswa edikeni lomlilo!
Kodwa yintoni kanye luluphawu lwerhamncwa, uphawu le inkokeli lokuphela kwexesha nezopolitiko? Ngaba iya kuba YENDAWO, Literal AMANQAKU (okanye lo uphawu nje isikweko, ukuba ezinye uhlobo efihliweyo, intsingiselo eyimfihlakalo)?
Uphawu lwerhamncwa iya kubakho uphawu yokoqobo emzimbeni! KwiSityhilelo 13:16 & iinguqulelo 14:11 ezininzi ezahlukeneyo zeBhayibhile (GW, nog, EXB, ngokutsho kweBhayibhile, & JB) kurhulumente ukuba uphawu lwerhamncwa iya kuba "ndiziphethe" kwi ngabantu. I AMPC, NABRE, & urhulumente EXB ukuba uphawu lwerhamncwa ziya zestampu ebantwini. Kodwa ke ndithanda indlela iBhayibhile Living liguqulela ezi ndinyana zimbini ilungileyo, njengoko utsho ukuba uphawu lwerhamncwa iya kuba "ziyabhalwa" abantu! Kodwa kungakhathaliseki ukuba uphawu lwerhamncwa uphawu, isitampu, okanye zingabhalwa, zonke ezi nguqulelo ngamxhelo uyavuma ukuba amanqaku aya kuba AMANQAKU yokoqobo GADALALA ukuba ngokulula abanye baya kuba nako ukubona!
UKUFUMANA AMANQAKU = SOKUZINIKELA KUSATHANA!
Ukuba ufunda incwadi yeSityhilelo ngenyameko kakhulu (ingakumbi isahluko 14) uya kuqaphela ukuba nabani na UKULUNGELE owamkela uphawu lwerhamncwa uya kohlwaywa ngokuqatha nguThixo. Kodwa uThixo uya kuzivelela umntu abanalo eli uphawu EMZIMBENI Ukunyanzelwa phezu kwabo, ningayi kubohlwaya yena umntu bengazi wamamkela lo uphawu (njengoko abathile nkolelo iyelenqe bafundisa)! Umntu kufuneka ngengqiqo, eyamkela ngovuyo uphawu.
Kodwa nabani na abamthobelanga ngabom ivumela uphawu lwerhamncwa, ukuba sibekwe umzimba wakhe (nokuba esandleni sabo sokunene, nokuba kusemabunzini, abo) ziya kuya ngqo noThixo! Kunokuba bathobele uMdali wabo, baya endaweni kuba uthobela Sathana! Baya uyi kuba zibonakalisa axhasa nokuthembeka kwabo uSathana uMtyholi (jonga ISityhi 13:16 kuzo zombini i-AMP & EXB iinguqulelo zeBhayibhile)! Kwaye abo benjenjalo baya ngokungqongqo kohlwaywa nguThixo! Kwaye baya kuba Akunakuziphendulela, kuba nje kukho amangqina amabini (okanye abaprofeti) bebaxelela ukuba banqule irhamncwa (okanye nomfanekiso wakhe) okanye amkele uphawu lwalo, kodwa ingelosi evela ezulwini kwakhona umthetho abemi belimiweyo ukuba benze njalo (ISityhilelo 14: 9)!
Ngoko ke, yintoni na ligama lerhamncwa? Yaye ngubani na oya kuba le yinkokeli ekupheleni-ixesha ezopolitiko? Lingubani na, inye into siyazi ngokuqinisekileyo, oonobumba igama lakhe uya kongeza ukuya 666! Kodwa nabani na ucinga negama elilungileyo ngaphezu ROMAN?
Okokuqala, "ROMAN" elinokuguqulelwa njenge "LATEINOS" ngolwimi yesiGrike. (Kodwa kutheni sebenzisa ulwimi isiGrike? Ngenxa yokuba uninzi iTestamente Entsha yayibhalwe ngesiGrike-kuquka incwadi yeSityhilelo). Xa ulwimi lesiGrike "L" imele inani 30, "A" 1, "T" 300, "E" ngu 5, "ndathi," yi-10, "N" yi-50, "Thixo" 70, kwaye " S "nto 200. Dibanisa nabo (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) kwaye yintoni ke? 666!
Okwesibini, ukuba igama lakhe "ROMAN," bekuya kufana nemfundiso emnye njengoko bekuya ukumela izinto ezintathu kwenye. asizi kuba igama yoku-xesha inkokheli zopolitiko, kodwa kwakhona ukumela uBukhosi baseRoma kwakunye ROMAN (yamaKatolika) Church.
Kungakhathaliseki ukuba yintoni na kwixesha elizayo, UNGAZE (phantsi kwazo naziphi na iimeko konke!) Ukufumana uphawu lwerhamncwa okanye kumnqula (i.e. ngokamchasi) okanye umfanekiso wakhe !!!
"Bantwana, lilixa lokugqibela eli; njengoko walivayo wena ... umchasi-Kristu uyeza ... umntu wesono ... unyana wotshabalalo; lowo uchasayo, uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo, nehlonelwayo ... yena uya kuhlala itempile kaThixo, kuba naye ngokwakhe uThixo "(1 Yohane 2:18 Matthew; 2 Tes 2: 3-4 Matthew; 2 Tes. 2: 4. ozigqatsayo).
"Emva Lawuvulela umlomo walo ekumnyeliseni uThixo, ukuba lilinyelise igama lakhe, nomnquba wakhe, nabo bahleli emazulwini. Kwaye Lanikwa igunya lokulwa nabangcwele [amaKristu okwenyaniso] libeyise [liboyise] kubo. Lanikwa igunya kuzo zonke izizwe, neelwimi, neentlanga. Kwaye bonke abo bemiyo phezu komhlaba baya kumnqula kuye, abamagama angabhaliweyo encwadini yobomi ... "(ISityhi 13: 6-8 Matthew).
"Ukuba umntu uyalinqula irhamncwa [i.e. Umchasi] nomfanekiso walo [i.e. umfanekiso wakhe], aze amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe okanye esandleni sakhe, uya kusela kwiwayini yomsindo kaThixo, eliphalala bapheleleyo kwindebe ubhavumo lwakhe. Yaye uya kuthuthunjiswa ngomlilo nesulfure phambi izithunywa ezingcwele phambi kweMvana [i.e. UYESU khristu]. Umsi wokuthuthunjelwa kwabo unyuka ngonaphakade kanaphakade, yaye akukho abanakuphumla imini nobusuku abo banqula irhamncwa nomfanekiselo walo, nomntu ukuba uthi alwamkele uphawu lwegama lalo "(ISityhi 14: 9-11 Matthew).
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi ngokuphathelele uphawu lwerhamncwa, nceda ufunde "ISityhilelo ukuvakala" kwaye Ezi ncwadi zifumaneka simahla kwi "Umchasi & The Final Iminyaka 7.": www.TheBibleComesAlive.com
xhosa = isiXhosa
Ukuba ngaba ungathanda ukufunda naziphi na izinto zam okanye iincwadi ngolwimi lwakho, nqakraza nje kule linki ilandelayo: https://translate.google.com. Olu nxibelelwano luza ukuguqulela yonke imibhalo zam ukusuka IsiNgesi ukuya ngolwimi lwakho. Kodwa ukuguqulela page 1 kuphela ngexesha.